The oké akwụna nke Harald Gustafsson | Apg29
The oké akwụna nke Harald Gustafsson
Ọ bụ dara ụka, nke na-emepụta na foto a - ụgha Christianity.
Abụọ dum isi jiri Mkpughe na-nkọwa nke oké nwaanyị akwụna. N'ihi ya na-aghọta na e nwere a ịrịba onu, nke na-emeso n'isiakwụkwọ ndị a.
Harald Gustafsson bụ a ezinụlọ aha na ọ bụ a Pentikọstal pastọ ke Smyrna Church na Gothenburg ke 1945 - 1967. O dere akwụkwọ bụ Ozi si Mkpughe. Otu n'ime akwụkwọ isi, nke isiokwu ya The Great Akwụna.
The oké akwụna Up. 17 na 18
The ahaziri usoro na anyị na-ezute ná Mkpughe, onwere a ogologo oge. N'ihi ya, ọ bụ na anụ ọhịa - na-ekpere arụsị steeti ike, n'ihi ya, ọ bụ na-alụ ọhụrụ - Chọọchị - na-na oké akwụna. Ị ga-ahụ na ha na ha mere eme na-ekwu. The akụkọ ihe mere eme anya dị mkpa, ma ọ bụrụ na anyị na-ịghọta Mkpughe iju oyiyi. Abụọ dum isi jiri Mkpughe na-nkọwa nke oké nwaanyị akwụna. N'ihi ya na-aghọta na e nwere a ịrịba onu, nke na-emeso n'isiakwụkwọ ndị a.
Ònye bụ oké akwụna?
Ọ bụ dara ụka, nke na-emepụta na foto a - ụgha Christianity. Nke a image a na-eji na Bible, mgbe ahụ, iko megide Chineke ga-ike iji. The Old Testament Israel ekwesịghị ntụkwasị obi na Chineke na-akpọ skökoväsen ndị amụma. Ma mgbe New Testament Church bụ ekwesịghị ntụkwasị obi nye Jehova, ọ na-aghọ a akwụna n'anya ya.
Moderskökan nwere ike ịbụ onye ọ bụla ọzọ karịa Roman Catholic popu. Nke a na chọọchị bụ nne nke-ọzọ skökokyrkor n'ụwa.
Oké nwanyị akwụna ahụ na-alụ Assembly bụ ndị ọ bụla ọzọ zuru okè iche. An English edemede ka n'ụzọ dabara adaba kwuru na ọdịiche. Otu na-anọchi anya na-adị ọcha onwe ya; ndị ọzọ bụ otú na-adịghị ọcha, na omume ire ure nwere ike ime ka ya. Otu bụ Nwa Atụrụ chick; ndị ọzọ na-ejikọta ya na nke ụwa ajọ ndị eze. Otu na-yi a amamiihe ọcha uwe mwụda ezi omume; nke abụọ guise nke n'ụwa ebube nke-acha odo odo, acha uhie uhie na gold. Otu bụ a emerụghị; ndị ọzọ bụ ndị nne nke-akwa iko nke ụwa. Otu na-asị ma na-akpagbu; ndị ọzọ bụ mmanya na-egbu ya na ọbara nke ndị nsọ. The alụ ọhụrụ, anyị agakwaghị nke ịma mma nke ebube nke eluigwe; nwaanyị akwụna na-apụ n'anya na ọchịchịrị na-aṅụ sịga si onwunwe nke ọkụ nke na-erichapụ ya.
Ọ ghọrọ Roman Catholic nwaanyị akwụna nke ụka bụ otu ugboro apostlatidens Agbamakwụkwọ ọgbakọ. Ma n'efu banyere ma bibie n'inwe nnuku mmụọ. Priestcraft bịara n'ikpeazụ, kama ime mmụọ ozi na onyinye ime mmụọ. Ma mgbe Eze Ukwu Constantine were ochie chọọchị Katọlik n'okpuru ọchịchị Rom patronage, na ọ bụ na-acha maka popu.
Nwaanyị akwụna ahụ nwere ya n'aka a ọlaedo cup jupụtara árú na filthiness ya iko. Árú bụ mgbe ndị aha nke ikpere arụsị na Akwụkwọ Nsọ. Na Roman popu ikpere arụsị bụ otú ahụ n'ụzọ zuru okè na-ekpere arụsị, dị ka ọ nwere ike inwe. Ọ bụghị naanị na ikpere arụsị, ọ bụ nkwulu megide Chineke. Pope na-azọrọ na Chineke ebe. Ọ na-azọrọ na-Christ ke ibuot n'ụwa. Leo X - na Pope bụ onye a dịkọrọ ndụ Martin Luther - natara Chineke ùgwù. Lateran Council tụọrọ ya ụtụ n'okwu ndị a: "Anyị na-ukwuu na-eto gị Chineke ebube. Ị bụ ndị chọọchị ahụ na di, Prince nke Ndịozi, eluigwe na ala onyenwe eze. Ị bụ onye ọzụzụ atụrụ na dọkịta. Ị bụ Chineke. "
Ọzọ pope, Pius IX, kwuru banyere onwe ya: "Abụ m ụzọ, eziokwu na ndụ"
Ọ ikpere arụsị, nke bụ ugbu a na nke a na chọọchị dị ka Maria òtù nzuzo ma na-efe nke ndị nsọ, bụ ihe ọ bụla ma ndị agadi na-ekpere arụsị mångguderiet, nke chọọchị ketara n'aka na-ekpere arụsị na mgbe nyere a nta Christian tinge. N'ime popu Meri dochie anya ya ma Chineke bụ Nna nakwa Jesus Christ. Mary bụ onye ogbugbo. Ee, ọ bụ Chineke.
Pope Church ofufe na ofufe nke imerime nsọ bụ otú a ma ama, ọ bụ na-enweghị isi na-ekwu okwu banyere ya. Skökokyrkans ọlaedo cup jupụtara árú.
The wayo nakwa ẹdude ya ka ịkwa iko adịghị ọcha. Ọ Aims ọma na mbụ nke ya ekwesịghị ntụkwasị obi na ugw ukwu na ya Tọhapụrụ ka ụwa ukwu na ya isi. Ime mmụọ ya iko ahụ.
Ma popu nwekwara dị n'abis nke omume ire ere. The Catholic-nchu-àjà na-nnọọ na-akwa iko. Alughi di kemgbe ha isi bụrụ ọnụ.
Mgbe Roman Catholic seminarị, a akwụkwọ ọgụgụ nke omume ọma nke nkà mmụta okpukpe nke a jesuitteolog Alphonsus Maria de Liguori. Nke a akwụkwọ ọgụgụ na-enye a zuru ezu na ntụziaka na na ụdị nile nke omume rụrụ arụ na omume rụrụ arụ na mmekọahụ rụrụ arụ.
The Norwegian dere Marta Steinsvik bipụtara akwụkwọ nke iri atọ na afọ gara aga na aha nke Saint Peters Himmelnökler. E nwere, ọ na-ekpughe popu ọtụtụ ihe e mejọrọ iko n'ụzọ na mere ndị ụkọchukwu Katọlik nnọọ oké iwe. The akwụkwọ bụ n'ihi na ọtụtụ akụkụ naanị see okwu si tumadi Liguoris omume nkà mmụta okpukpe kamakwa site ọzọ Catholic dere 'akwụkwọ. Ndị a ruturu e weere site onye nnyocha dị ka ndị rụrụ arụ, na nnukwu ngalaba nke akwụkwọ kpuchie ink.
Mgbe Catholic nchụàjà na-aga ime inweta ihe ọmụma banyere omume rụrụ arụ na mmekọahụ rụrụ arụ na, dị ka a akwụkwọ ọgụgụ juputara na-akụzi, ha na-atụle na-adị njikere maka ozi ha na Catholic confessionals.
Olee otú ọtụtụ puku ndị inyom bụ ndị e atap site ndị nchụàjà na confessionals, eleghị anya ọ dịghị ihe karịrị Chineke ịdabere na ha. The Catholic confessional kemgbe a isi iyi nke isi iyi nke omume ùgwù karịa ikekwe ọ bụla ọzọ. Ndị obi abụọ izi ezi nke m okwu nwere ike ịgụ na e hotara na mbụ n'akwụkwọ site Marta Steinsvik ma ọ bụ na akwụkwọ The nchụàjà, bụ nwaanyị ahụ na nkwupụta Charles Chiniquy, onye maka afọ iri ise bụ ndị Catholic Church na otu onye nchụàjà e.
The oké akwụna na anụ ọhịa
Anụ ọhịa ahụ, dị ka anyị kwuru na mbụ, na-ekpere arụsị na steeti. Na nke a uhie uhie anụ ọhịa nọdụ nwaanyị akwụna ahụ. Ọ pụtara, na mbụ, na ndị ọchịchị na-akwado nwaanyị akwụna nke ụka. Nke a malitere mgbe Constantine elu the Christian Church, na steeti okpukpe, o wee na n'okpuru obodo si ndo na nchebe. Ọ bụ chọọchị isi mberede. N'eziokwu biri ọbara mkpagbu si Government, ma chọọchị ghọkwara dabere na steeti. Nke a nzukọ ọnọdụ nke na-ekere òkè niile ọchịchị na-akwado na, ruo n'ókè ụfọdụ na steeti ahụ duziri Christian ụka nke Old Catholic. Mgbe e mesịrị, popu bilitere n'elu ala. The mkpakọrịta na ala bụ otu n'ime nzọụkwụ nke ndị chọọchị ize ndụ skökoväg.
Ma nwaanyị akwụna nọ n'elu anụ ọhịa ahụ pụtakwara na ọ chọrọ na-reins ma na-edu ha aka ma na-achịkwa steeti ike na ya ụtọ. Na Roman Catholic Church mmepe, anyị na-ahụ nke a n'ụzọ doro anya. The popu were nnọọ anya n'aka ụzọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ruo ọtụtụ narị afọ, ebe ọ bụ na ndị isi na ndị eze ukwu mpi iji merie pope na popu amara na amara. Ha anaghị chọọchị njikere ngwaọrụ ịrụ ya iwu. Ya ike nwere mgbe ụfọdụ a na nnọọ ukwuu nke na ma eze ukwu na ndị eze e iwu, ma ọ bụrụ na ha jụrụ irube isi ya. Ọtụtụ nke ochie eze ukwu na-kpuwere site Pope. The popu enwetara n'ụzọ ọ bụla ukwuu na ndọrọ ndọrọ ọchịchị. The chọọchị ndọrọ ndọrọ ọchịchị mmetụta bụghị ma biri. Ikekwe ike ya ga-ọbụna karị na njedebe nke oge, tupu ihu nke ikpe Chineke.
Otu ụbọchị, Otú ọ dị, anụ ọhịa ahụ na-atụba na mkpari onye na-agba onwe ya. Mgbe ahụ ya öclestimma tie.
The oké akwụna na nsọ.
M chọrọ mesie ya ike na mgbe anyị na-ekwu nke Roman Catholic Church, ọ bụ usoro na anyị na-ekwu abụghị ndị mmadụ n'otu n'otu. E nwere, ha ka na-atụ egwu Chineke nke a na chọọchị, dị ka nke ọma dị ka ọ na a Pentikọstal ụka nwere ike ịbụ ndị dara n'ime ime mmụọ skökoliv. N'ihi ya, ọ bụ na usoro anyị na-ekwu okwu banyere. "M hụrụ nwaanyị ahụ ókè na ọbara nke ndị nsọ." The popu nwere ẹduọk ọzọ ọbara nwụrụ n'ihi okwukwe karịa ndị niile na obi ọjọọ Roman Emperor ọnụ. Ọ na-eme atụmatụ na ọ dịkarịa ala iri ise nde ndị nwụrụ n'ihi okwukwe gburu a na chọọchị. Na popu obi ọjọọ na njikọ na ọtụtụ ndị nsọ n'ihi okwukwe ala ma tinyere Akwa Edidem Nero ibak ibak ke ndo.
Inkvisationen na Middle Ages na ya ngwá ịta bụ otu n'ime ihe ndị kasị diabolical, mepụtakwara na mmekpa ndị ọzọ. Ha achọghị na nanị na-egbu ha tara. Tupu ọnwụ bịara dị ka a mgbapụta, nwere ọtụtụ nke ndị a dị nsọ anata direst ahụhụ. Njụta Okwukwe n'olùlù karịrị nkọwa jọgburu onwe. Karịsịa Spanish inkvisationen nweela a ọbara aha. Inkvisationsdomstolarnas òtù họpụtara ndị Pope.
The Roman Catholic Church bụ na-esote taa adịghị theoretically jụrụ ma ọ bụ na eze kagburu Njụta Okwukwe. Inkvisitionskongregationen nyorganiserades na 1908 na ka mbụ n'etiti niile nke a na chọọchị ọgbakọ. The Pope onwe ya bụ nke a na alụmdi achị achị nakwa prifekt. Nke a na-ekwu ọtụtụ ihe banyere ndị chọọchị ahụ na-ele ndị ha na-akpọ ndị jụrụ okwukwe.
Ọ bụ ezie na Chọọchị Ọtọdọks na Russia, na-akpagbu na oge ya dị otú ahụ Ndị Kraịst nọ na okwukwe ha dị iche n'ihe chọọchị na ozizi. Ọtụtụ ndị n'oké olu na oke banyere n'elu obi tara mmiri ụzọ nke bolsehevikerna na njikọ na Russian mgbanwe liquidated Chọọchị Ọtọdọks. Ma gịnị mere na-ekwu okwu banyere obi ọjọọ ahụhụ na ndị ọzọ kwere ekwe na-gụrụ na chọọchị n'akụkụ na ha ụkọchukwu. Ìgwè mmadụ nke ndị nsọ na-ahụsi anya Russian mkpọrọ na doro afọ ịta mmiri na-ata ahụhụ n'ihi na nke a Church àgwà ndị ọzọ kwere ekwe. A iju mmekọrịta pụrụ hụrụ, ahụ na chọọchị gbara ndụ na ala. N'ìhi ya bụ na ala-akpagbu ndị Kraịst. The ụka we mgbe a ọbara ọrụ. Na ruo n'ókè nke na ndị ọchịchị nwere gburu mkpagbu dị otú ahụ mgbe e mesịrị, ọ dịla ndị chọọchị ahụ na ngwaọrụ. Otu onye edemede kwuru, sị: "Ugboro ugboro, ọ na-ịga nke ọma nke a na-egbu, akwụkwọ ozi ahụ ike nke Chọọchị Ọtọdọks na-eme ka ike, Chineke víirldsordningens ngwaọrụ, n'ime a docile ngwá nke ha akpịrị ịkpọ nkụ maka ọbara na ya mkpagbu iwe. N'ebe ọ bụla a förvärldsligad okpukpe skökovíisen kwekọrọ na ike ụwa, n'ebe ọ bụla ọ na bewitching seduction ike onwem nwaanyị rịa ụwa ike uhie ụmụ anụmanụ na (Nkpughe 17), ebe anyị na-ahụ anya na ụlọ mkpọrọ na-emeghe, ogwe ọkụ, ya adịkwa a ụgha Christian ikpe mmehie ikpo elu n'ebe heaven.
The nwaanyị akwụna na-aṅụbiga ọbara nke ndị nsọ.
Oké nwaanyị akwụna ha
Nke a ikpe ga-n'ụzọ dị ukwuu na a gbasoro otu anụ ọhịa ahụ, na mbụ rụrụ ya. Na Russia, anyị ahụwo otú red Kọmunist ọchịchị n'agha Chọọchị Ọtọdọks na fọrọ nke nta ka kpam kpam ya. Otu ugboro ugboro a afọ ole na ole mgbe e mesịrị na Mexico. Site n'ihe atụ ndị a na-enweta ihe echiche nke otú ọ ga-aga mgbe vilcldjuret tinyere ndị eze nke ụwa 'ga-asị na ndị akwụna, ọ ga-eme ka ya n'efu ma gba ọtọ, ha ga-eri anụ ahụ ya, na ya ọkụ "(Nkpughe 17: 16 b).
Otu ụbọchị na ala ga-ikwanye apụ niile ụka mmetụta, na kama na-ebu ya elu, ọ ga-bibiri ya.
Na Mkpughe iri na asatọ isi mere na nwaanyị akwụna na Babịlọn Ukwu dị ka otu echiche. Nke a eju ụfọdụ. Echere m na ọ bụ otu ihe ahụ ruru ka mgbe nwunye na New Jerusalem dị njikere dị ka otu ihe ahụ. Na n'aka nke ọma na New Jerusalem bụ nwunye ebighiebi n'ụlọ, mgbe nwaanyị akwụna nke bi na Babịlọn Ukwu ahụ. N'ebe ahụ, ọ na-anọdụ dị ka eze nwaanyị, na Bebel spirit ọ nwere. Mgbe ahụ, mgbe Babịlọn Ukwu na-aga n'okpuru, bụkwa nwaanyị akwụna na ikpe ezi omume Chineke.
N'ime gbarụọ kọwaa oké akwụna, a ịdọ aka ná ntị na Mgbama ụda nke si n'eluigwe.
"M wee nụ ka olu ọzọ nke si n'eluigwe sị:
Bịanụ si ya, ndị m, na unu onwe unu ghara ịga ya mmehie, nakwa na unu anata bụghị n'ime ihe otiti ya. " (Mkpu 18: 4).
Nile pụta ime mmụọ skökoväsen!
Anyị bụ ndị na-nnọọ nso mgbe ikpe nke nwaanyị akwụna nke ụka, a ga-akwanye gị akwanye. Dị ka anyị mara, na oge na-eru nso maka alụmdi na nwunye nke Nwa Atụrụ ahụ. Ka anyị dịrị kwesịrị ntụkwasị obi anyị nke eluigwe-alụ nwaanyị ọhụrụ, ya mere, anyị na-na-mma izute ya mgbe ọ na-abịa!
Ọ na-abịa n'oge na-adịghị! -Adị njikere!